Vaovao - andrasana ny indostrian'ny fampiratiana LED handrava ny famerenana amin'ny laoniny ny vokatra, ny vokatra avo lenta dia hanitatra bebe kokoa hatrany ny taha tombony.
Ny indostrian'ny fampiratiana LED dia antenaina handray ny famerenana amin'ny laoniny ny vokatra, ny vokatra avo lenta dia hanitatra bebe kokoa ny tombom-barotra.
Ny indostrian'ny fampisehoana LED dia andrasana hampiditra vanim-potoana famerenana amin'ny laoniny ny fahombiazany. Araka ny tatitra farany an'ny Trend Force, fikambanana mpikaroka eny an-tsena, ny tombam-bidin'ny vokatra LED manerantany dia antenaina hitombo 13,5% isan-taona amin'ny US $ 6,27 miliara amin'ny 2021.
Araka ny tatitra, ny tsena fampirantiana LED manerantany dia ho tratry ny valanaretina amin'ny 2020, ary ny sandan'ny vokatra amin'ny ankapobeny dia hahatratra $ 5.53 miliara dolara fotsiny, fihenan'ny 12,8% isan-taona. Ny fihenan'ny fangatahana any Eropa sy Etazonia no tena miharihary. Ao amin'ny 2021, rehefa miakatra ny fangatahana amin'ny ankapobeny ary miakatra ny vidin'ny singa miakatra noho ny tsy fahampiana, hampiakatra ny vidin'ny vokariny miaraka ireo mpamokatra fampiratiana LED. Amin'ity taona ity, antenaina hiakatra ny sandan'ny vokatra avoakan'ny tsena fampiratiana LED.
Anisan'ireo orinasa mitarika, i Leyard dia nanambara ny vinavinan'ny tatitra isan-taona, ary ny tombony azo amin'ny tapany voalohany amin'ity taona ity dia 250-300 tapitrisa yuan, raha ampitahaina amin'ny 225 tapitrisa yuan tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Raha ny filazan'ny orinasa dia mitombo hatrany ny filan'ny tsena fampirantiana eto an-toerana ary ny isan'ny kaomandy vaovao nosoniavina tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona dia nitombo be raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Hatramin'izao, ny isan'ny kaomandy vaovao natao sonia tany ivelany dia nihoatra ny fe-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Toa ny Trend Force, Zou Lanlan, mpandalina ny Great Wall Securities dia nanome torolàlana be fanantenana ihany koa. Ny mpandalina dia namoaka tatitra fikarohana tamin'ny 26 Mey, nilaza fa manantena ny 2021, ny tsena anatiny dia antenaina hanohy ny fironana amin'ny famerenam-bola amin'ny Q4 2020. Mandritra izany fotoana izany dia antenaina ho sitrana ny tsena any ivelany rehefa mihena ny valan'aretina. . Amin'ny 2021, ny tsena fampiratiana LED dia hahatratra 6,13 miliara dolara amerikana, fisondrotana 12% isan-taona.
Ny mpandalina dia manantena bebe kokoa momba ny làlana avo lenta fampiratiana LED kely, izay manondro fa ny efitrano fifehezana, ny biraon'ny orinasa, ny efitrano fampirantiana vokatra ary ny efitrano fivoriana dia mampihatra haingana ireo vokatra fampiratiana LED kely. Tamin'ny taona 2020, manoloana ny fihemoran'ny ankapobeny ny fangatahana fampirantiana LED, ny fandefasana vokatra kely sy ny vokatra tsara (miaraka amin'ny habe tsy mihoatra ny 1.99mm) dia nahatratra 160.000 unit, fitomboan'ny 10% isan-taona isan-taona, ary izy antenaina hahatratra singa 260,000 amin'ny 2021. Fisondrotana isan-taona efa ho 59%, ny indostria dia mitazona firoboroboana avo lenta hatrany.
Araka ny angon-drakitra leoparda, ny haben'ny tsenan'ny fampiratiana LED any Chine dia andrasana hitombo ho 110,41 miliara yuan amin'ny 2023, ary ny tahan'ny fitomboana isan-taona amin'ny taona 2019-2023 dia hahatratra 14,8%. Anisan'ireny, ny tsena LED kely-pitch dia hahatratra 48.63 miliara yuan amin'ny 2023, izay manakaiky ny antsasaky ny tsena LED manontolo.
Amin'ny ho avy, miaraka amin'ny fanitarana bebe kokoa ny haben'ny fampiharana ny fampisehoana kely an-tsehatra, ny fampisehoana Mini LED ary ny fampisehoana Micro LED dia mahatsapa tsikelikely ny fampiharana midadasika, ary mbola misy toerana malalaka ho an'ny fitomboan'ny indostrian'ny fampiratiana LED.
Anisan'ireo orinasa voatanisa, Lijing, fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny Leyard sy Epistar Optoelectronics, dia nanomboka namokatra tamin'ny volana oktobra 2020, lasa toeram-pamokarana masinina Micro LED voalohany manerantany. Amin'izao fotoana izao, feno ny baiko ary nitarina mialoha ny fandaharam-pamokarana. Fu Chuxiong, mpandalina iray amin'ny Galaxy Securities, dia naminavina fa amin'ny taona 2021, ny vokatra Micro LED an'ny orinasa dia hahazo vola 300-400 tapitrisa yuan, ary hitazona fironana fidirana haingana any aoriana.
Ny fampandrosoana haingana ny fampisehoana LED kely dia nitondra toerana malalaka ho an'ny teknolojia famonosana LED. Ny fonosana COB dia manana tombony amin'ny hazavana sy mahia, ary fitoniana avo lenta ho an'ny fampiharana anaty trano. Raha ny angona LED ao anaty, araka ny sandan'ny vokatra fonosana LED, dia manodidina ny 2,14 miliara dolara amerikana ny vidin'ny vokatra LED ary 13% kosa ny any ambany. Miaraka amin'ny fahamatorana tsikelikely amin'ny pitch-pitch, mini LED ary vokatra hafa amin'ny ho avy, ny tahan'ny sandan'ny vokatra mifandraika amin'izany dia hitombo tsikelikely.